काभ्रेमा वडाध्यक्ष र व्यापारीबीच कुटाकुट ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»पत्रपत्रिका»काभ्रेमा वडाध्यक्ष र व्यापारीबीच कुटाकुट !
काभ्रेमा वडाध्यक्ष र व्यापारीबीच कुटाकुट !
By रबि धिताल on २६ चैत्र २०७४, सोमबार ०३:१५ पत्रपत्रिका
काठमाडौं, चैत २६ : बनेपा नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष र व्यवसायीबीच कुटाकुट भएको छ । कुटाकुट हुँदा हार्डवयर पसलमा क्षति पुगेको छ भने एक स्थानीय घाइते भएका छन् । वडाध्यक्ष सचितानन्द केसी र खानीखोला हार्डवयरका प्रोपाइटार सुधिर श्रेष्ठबीच कुटाकुट भएको हो ।
सडकमा गाडी रोकेको भन्दै वडाध्यक्ष केसीले आइतबार बिहान साढे ८ बजे हार्डवयरका सञ्चालकलाई गाडी हटाउन भनेका थिए । उनले नमानेको भन्दै अध्यक्ष केसीले हाडवर्यका सञ्चालकलाई धकेलेपछि सामान्य घटनाले उग्ररुप लिएको थियो । बनेपा नगरपालिकाले फुटपाथमा पार्किङ गर्ने गाडीहरु हटाउने अभियानस्वरूप बरम्बार सूचना जारी गरिरहेको थियो । व्यवसायीहरुले सूचनालाई अवज्ञा गर्दै फुटपाथका पसल र गाडी पार्किङ हटाउन अटेरी गरिरहेका थिए ।